Shaacinta Affiliate - BikeHike
Shaacinta Xidhiidhka Agabka: Qaar ka mid ah xidhiidhada ku jira mareegahan ayaa ah xidhiidho xidhiidhiya. Tani waxay ka dhigan tahay haddii aad gujiso isku xirka oo aad iibsatid shayga, milkiilaha mareegahaan wuxuu heli doonaa guddiga xiriirka la leh. Iyadoo aan loo eegin, mulkiilaha mareegahani waxa uu kaliya ku talinayaa alaabooyin ama adeegyo qiimo ku kordhin doona akhristayaasha. Milkiilaha mareegahaan ayaa shaaca ka qaaday tan si waafaqsan Guddiga Ganacsiga Federaalka 16 CFR, Qaybta 255: Tilmaamaha Ku Saabsan Adeegsiga Taageerida iyo Markhaatiifka Xayeysiinta.
Mareegahani waxa laga yaabaa inuu aqbalo foomamka xayaysiisyada lacagta caddaanka ah, kafaala-qaadka, gelinta lacag bixinta ama noocyada kale ee magdhowga.
Magdhawga la helay waxa laga yaabaa inuu saameeyo waxa ku jira xayaysiisyada, mowduucyada ama qoraalada lagu sameeyay mareegahan. Mawduucaas, booska xayaysiinta ama boostada ayaa laga yaabaa inaan had iyo jeer loo aqoonsanin inay yihiin wax la bixiyay ama la kafaala qaaday.
Mulkiilaha mareegahan waxa laga yaabaa in magdhow lagu siiyo si ay u bixiyaan ra'yiga alaabta, adeegyada, mareegaha iyo mawduucyo kale oo kala duwan. Inkasta oo mulkiilaha(yaasha) degelkani uu helo magdhow qoraalladayada ama xayaysiisyadayada, had iyo jeer waxaan siinaa fikradaheena daacadda ah, natiijooyinka, aaminaadda, ama khibradaha mawduucyadaas ama alaabooyinkaas. Aragtida iyo ra'yiga lagu sheegay mareegahaan waa qoraaga. Sheegasho kasta oo badeecad, tirakoob, xigasho ama matalaad kale oo ku saabsan badeecad ama adeeg waa in laga xaqiijiyaa soo saaraha, bixiyaha ama kooxda ay khusayso.
Websaydhkan kuma jiraan wax kasta oo soo bandhigi kara khilaaf xiisaha leh.
Afeef Barnaamijka Amazon Associates
bikehike.org waa ka qaybgale Amazon Services LLC Associates Program, waa barnaamij xayaysiis xidhiidhsan oo loogu talagalay in lagu bixiyo hab ay goobuhu ku kasbadaan khidmadaha xayaysiinta iyagoo xayaysiisinaya iyo ku xidhidhiyaha Amazon.com. Amazon, summada Amazon, AmazonSupply, iyo summada AmazonSupply waa calaamadaha ganacsiga ee Amazon.com, Inc. ama kuwa raacsan.
Qoraalada Blog-ga waxaa ku jiri kara Amazon's affiliate links, taasoo la micno ah, haddii aad gujiso oo aad iibsato Hadda ama aad iska diiwaan geliso barnaamijka Amazon, bikehike.org waxaa laga yaabaa inay hesho komishan. Tani wax kharash dheeraad ah kuguma aha.